Festival Tamaga Midôla : Miditra amin’ny dingan’ny famaranana -
AccueilVaovao SamihafaFestival Tamaga Midôla : Miditra amin’ny dingan’ny famaranana
Efa saika tafiditra amin’ny dingan’ny famaranana avokoa ireo taranjam-pifaninanana efatra (beach soccer, beach volley, beach handball ary beach rugby) hiadiana amin’ny « Festival Tamaga Midôla ». Hetsika karakarain’ny fikambanana Tafaray, ary tanterahina amin’izao fotoana izao eny amin’ny torapasiky ny i Toamasina. Voahaja ny lôjika tamin’ireo taranja efatra niadiana ireo, satria saika tafakatra hiatrika ny manasa-dalana avokoa ireo ekipa vaventy. Tsy vitan’ny fifaninanana fotsiny ihany mantsy no tazana amin’ny
« Festival Tamaga Midôla » fa mampiaina ny mponin’i Toamasina amina fety satria dia ahitana fanentanana ara-mozika amin’ny alalan’ny fisian’ny DJ izany. Mpiara-miasa amin’ny fikambanana Tafaray mandritra ny hetsika kosa ny Vondrona RLM Communication. Beach soccer Hifandona ny samy henjana Teo amin’ny taranja beach soccer, tafita hiatrika ny manasa-dalana rehefa tafavoaka teo amin’ny ampahefa-dalana i Analanjirofo, Mahajanga sy Toliara ary Toamasina mpampiantrano. Niady tanteraka ireo fihaonana efatra teo amin’ny ampahefa-dalana satria samy nampiseho ny heriny sy ny fahaiza-manaony avokoa ireo ekipa valo niatrika izany. Samy te ho tafita amin’ny manasa-dalana avokoa, saingy tsy maintsy misy ny maharesy ary misy koa ny resy. Teo amin’ireo fihaonana, anisan’ny lalao niady ny fifanandrinan’Analanjirofo sy Mananjary, izay nisaraka tamin’ny isa tery 4 noho 3 ka i Analanjirofo no tafavoaka. Efa tany amin’ny fanalavam-potoana mantsy vao nivoaka mpandresy ity ekipan’Analanjirofo ity satria nisaraka ady sahala 3 noho 3 ny roa tonta teo amin’ny fe-potoana ara-dalana. Toaraka izany koa ny fihaonana teo amin’i Mahajanga sy Morondava. Tamin’ny isa tery, 2 noho 1, ihany koa no nandresen’ny ekipan’i Boeny ny solontenan’i Menabe. Tsy namelan’i Toliara kosa indray raha tsy izy ireo no nivoaka mpandresy nanoloana an’i Melaky. Beach volley Mafy ny Stef’Auto sy VBCD Nitohy omaly ny fifanintsanana teo amin’ny beach volley. Lalao 20 no indray notanterahina tao anatin’ny roa andro nifaninanana. Marihina fa ekipa 10 no indray miady ny lohany eo amin’ity taranjam-pifaninanana iray ity ka mizara ekipa dimy isaka ny vondrona izany. Anisan’ireo ekipa manjakazaka hatrany am-boalohan’ny hetsika ny Stef’Auto, izay ekipa sangany ao Toamasina, sy ny VBCD, sangany avy any Antananarivo. Manampy azy ireo koa ny ASVBM avy any Boeny… Raha ny marina, samy nahita fandresena roa avy izy ireo ary faharesena iray avy. Ny Stef’Auto efa nandresy ny Mami VB, anisan’ireo ekipa misolo tena an’Atsinanana, tamin’ny seta 2 noho 0. Mbola nandavo ny VBCD tamin’ny seta 2 noho 0 ihany koa teo amin’ny lalao faharoa. Saingy, lavon’ny VBCD indray tany amin’ny fihaonana fahatelo. Toraka izany koa ny VBCD, nandresy ny ASVBM tamin’ny seta 2 noho 0 ary avy eo resin’ity ekipan’i Boeny ity tamin’io seta io ihany. Miezaka ihany koa ny Falco saingy, zara raha mahita fandresena. Mitohy anio ny fifanintsanana ary miditra amin’ny ampahefa-dalana sy ny manasa-dalana avy hatrany avy eo. Beach handball Manjakazaka i Toliara Niditra tamin’ny andro faharoa ny fifanintsanana teo amin’ny taranja beach handball omaly. Raha toa ka efa nandresy an’ny ekipa vaoafantin’ny Oniversiten’Antananarivo tamin’ny isa 2 noho 0 i Toliara, teo amin’ny fihaonana voalohany, mbola nandavo an’i Toamasina, mpampiantrano, tamin’ny io isa io ihany izy ireo omaly, teo amin’ny fihaonana faharoa. Manjaka tokana, araka izany, ity ekipa misolo tena an’Atsimo Andrefana ity. Toa ny nanao fanazarantena hiakarana amin’ny dingana manaraka izy ireo. Noho izany, anisan’ireo ekipa tsara toerana i Toliara amin’izao fotoana izao. Manaraka an’i Toliara, nanarina ny lesoka kosa i Mahajanga izay resin’i Toamasina tamin’ny « tirs au but », 5 noho 4, teo amin’ny fihaonana voalohany. Niezaka ireo mpilalao mandrafitra ny solontenan’i Boeny ka nahavita nanilika ny ekipa voafantin’ny Oniversiten’Antananarivo tamin’ny isa 2 noho 0. Hatreto, tsy mbola nahita mangirana teo amin’ny fifanintsanana ny ekipan’ny Oniversiten’Antananarivo, izay mbola tsy nitoko sy nahazo isa mihitsy. Mbola ho sarotsarotra kosa ny fiadian-toerana eo amin’ireo ekipa samy goavana, toa an’i Toliara sy Mahajanga ary Toliara.